Las Vegas, June 9, 2021 (Global News Agency) - Onye na-ere sayensị na Las Vegas, Nevada na-adịbeghị anya tụlere isiokwu na uru nke nyocha isiokwu maka mmezu nke ndị na-ere ahịa Amazon. Companylọ ọrụ ahụ mara ọkwa na nso nso a Amazon FBA keyword tool, nke e mere maka ndị na-ere na A ...GỤKWUO »
N'ehihie nke June 16, ụgbọ okporo ígwè mbụ si ọdụ ụgbọ mmiri ụgbọ okporo ígwè yinchuan gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri chongqing malitere n'ọdụ ụgbọ mmiri Yinchuan na ndịda. Traingbọ okporo ígwè a pụrụ iche nwere mkpokọta 60, na-atụle 1650 tọn, ọnụ ahịa ya dịkwa ihe dịka yuan 6.73. Ọrụ nke ...GỤKWUO »
Indianapolis-izu isii agafeela kemgbe onye ogbu egbe gburu mmadụ asatọ n'ụlọ ọrụ FedEx n'ala Indianapolis. N'oge ahụ, obodo jikọtara aka iji kwado ndị ọdachi dakwasịrị, ndị lanarịrị na ndị ezinụlọ ha, wee bulie ihe karịrị $ 1.5 nde. “Mgbe ihe ndị dị otu a mere, ndị mmadụ na-eche na enweghị enyemaka a ...GỤKWUO »
DHL nwetara mgbazinye ego ọhụụ maka ụlọ nkwakọba ihe Hams Hall nke ụkwụ Logicor dị 219,22
Logicor, onye na-eduzi ndị na-ahụ maka ịre ụlọ na Europe na ndị na-arụ ọrụ ya, gbazitere ụlọ nkwakọba ihe na kesara square ụkwụ 219,112 na ogige Hams Hall Distribution Park na Birmingham, UK na DHL. Onye ndu ụwa na ụlọ ọrụ lọjistik abanyela nkwekọrịta ọhụrụ ogologo oge na saịtị ahụ iji zute ya ...GỤKWUO »
Ọrịa okpueze ọhụrụ nke India dakwasịrị ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ
Anyị na-eji kuki maka ọtụtụ ebumnuche, dị ka ijigide ntụkwasị obi na nchekwa nke weebụsaịtị FT, ịhazi ọdịnaya na mgbasa ozi, ịnye usoro mgbasa ozi mmekọrịta, yana nyochaa ojiji nke weebụsaịtị anyị. Ebumnuche nke ọrịa Covid-19 na India ebubatala mbupu mba ụwa ...GỤKWUO »
LNG ka mmanụ ụgbọala na-achịkọta ọsọ, mana ụgbọ mmiri ndị toro eto na-eche ihu ihu n'okporo ụzọ
Emeputara ufodu 18.5% nke ohuru ohuru n'ime ọnwa anọ mbụ nke 2021 iji rụọ ọrụ na LNG dị ka mmanụ ọkụ dịka otu nhazi ọkwa DNV. Paul Bartlett | Mee 13, 2021 Kaosinadị, ọtụtụ ụgbọ mmiri ochie agaghị enwe ike ịchọta ihe ọhụrụ IMO siri ike carbon chọrọ ịnakwere na MEPC ...GỤKWUO »
Ndekọ lọta mba dị nnukwu mkpa maka ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi
Etu esi achọta ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ahịa mba ofesi? 1. Maka azụmaahịa mba ọzọ anyị, ọ bụrụ na azụmahịa azụmaahịa mba ofesi buru ibu, ọ ga-akwụsi ike. Nke mbụ, a ga-enwerịrị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbupu mba na ngwa ngwa dị ka Taishan. Shippinglọ ọrụ a na-ebu ngwa ngwa na-ebu ...GỤKWUO »
Usoro mmepe nke lọjistik mba ofesi
Site na omume nke ijikọ ụwa ọnụ na ịgbasawanye ọrụ, echiche nke ịwepụta ngwa ahịa dị iche na mbụ, usoro a na-adịwanye mgbagwoju anya, ihe ndị ahịa chọrọ na-esiwanye ike. Ya mere, na-adịbeghị anya, ụfọdụ expe ...GỤKWUO »
International awara awara nnukwu data interconnection lọjistik ụlọ ọrụ
Expresslọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ngwa ngwa ngwa mba ụwa nwere njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa, dịka ụlọ ọrụ awara awara na ụlọ ọrụ e-commerce, na nnukwu ohere imekọ ihe ọnụ. Site na-aga n'ihu njikarịcha na ukpụhọde nke ọrụ Ọdịdị site mwekota, ọ nwere ike ọ bụghị naanị mma nke ...GỤKWUO »